Jabhadda ONLF oo ka hadashay xariga Qalbi Dhagax - BBC News Somali
Jabhadda la dagaalanta Itoobiya ee ONLF ayaa ka hadashay xarig la sheegay in dowladda Soomaaliya ay u gaystay sargaal sare oo jabhadaas ka tirsan,Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, kaas oo ay jabhadda sheegtay in markii dambe lagu wareejiyay dowladda Itoobiya .
Afhayeenka Jabhadda Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo BBC-da waraysi siiyay ayaa sharaxay sababaha Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, wuxuuna yiri "Saddexdii sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya ayuu ku noolaa, reerkiisa ayuuna la noolaa, nin Soomaali ayuu ahaa oo xaq u leh in uu ku noolaado meel kasta oo dalka ka mid ah, wuxuu ahaan jirey sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qeybta 21-aad".
Dowladda Soomaaliya ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho arrinka xariga iyo wareejinta la sheegay in Qalbi Dhagax lagu sameeyey, mar xalay la weeydiiyay madaxda ugu saraysay oo idaacadaha toos dadka ogala hadlayay ayay sheegeen in aysan hadda ahayn xiligii munaasabka ahaa ee arintaas laga hadli lahaa.
Arrinta Qalbi Dhagax ayaa qabsatay baraha bulshada, iyada oo xitaa ay ka hadleen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo dad badan oo Soomaali ah.
Dowladda Itoobiya oo la sheegay in ninkan loo gacangaliyay ayaanan iyaduna wax hadal ah kasoo saarin.
Maqal Ma rumaysan kartaa inuu jiro bayloot Maraakiibta hagaa?!
Ma rumaysan kartaa inuu jiro bayloot Maraakiibta hagaa?!